Ihe ị ga - ahụ n’ógbè Pontevedra (I) | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Spain obodo, General, Pontevedra
Nke a na oge anyị na-aga n'ebe ugwu nke Spain, ka Pontevedra mpaghara,, ebe hụrụ njem nlegharị anya na-enye ekele maka onyinye dị iche iche na nke mbụ. Si mara mma osimiri ka a na-atọ ụtọ gastronomy, ngafe nke Portuguese Way ka Santiago na ọtụtụ narị obere nkuku ndị kwesịrị na-achọpụta. Ọ bụrụ na ị ga-aga ugwu, echefula nhọrọ a nke ihe ị ga-ahụ na mpaghara Pontevedra.
Anyị ji n'aka na a ga-enwe ndị chọrọ itinyekwu ihe na ndepụta ahụ, ihe ọma gbasara Galicia bụ na n'ọ bụla anyị chọpụtara ihe ndị na-adọrọ mmasị. Ebe jupụtara anwansi, akụkọ mgbe ochie nke ndị ya na ọdịbendị gbanyere mkpọrọgwụ nke enwere ọtụtụ ihe ịchọpụta. Ya mere, rịba ama ebe ndị a niile, ebe ọ bụ na ụfọdụ amaghị nke ọma.
1 Islas Cíes ogige ntụrụndụ
2 Pedra na Auga Nsoro
3 Obodo ochie Pontevedra
4 Combarro obodo azu
5 Cambados na albariño
6 Osimiri nke Rías Baixas
Islas Cíes ogige ntụrụndụ
N'ọtụtụ oge, anyị gwara gị banyere paradaịs a, ma ọ bụ nke ahụ Ogige ntụrụndụ Cíes Islands ọ bụ nnọọ ama. Iji rute n'àgwàetiti ndị a, ị ga-ebu ụgbọ mmiri site n'obodo ndị dị nso, na Vigo, Cangas ma ọ bụ Baiona. Mgbe anyị mere njem ụgbọ mmiri dị mkpirikpi, anyị rutere n'àgwàetiti ahụ, anyị wee hụ osimiri a ma ama nke Rodas, nke dị ka osimiri Caribbean, ọ bụ ezie na ọ nwere nnukwu mmiri oyi. Ọdịdị mara mma nke ga-efu ụbọchị niile, ma ọ bụ izu ụka niile ma ọ bụrụ na anyị nọrọ n'ogige ahụ. Ga n'ụlọ ọkụ ya iji hụ ọdịda anyanwụ bụ ihe ọzọ dị mkpa n'àgwàetiti a, mana maka nke a, ị ga-ehi ụra, ebe ọ bụ na ụgbọ mmiri ikpeazụ na-ahapụ n'oge. Anyị ga-achọpụta obere osimiri na akụkụ mara mma mara mma n’àgwàetiti a, anyị ga-adịkwa ọhụrụ.
Pedra na Auga Nsoro
Ọ bụrụ na ị hụbeghị oke ọhịa Galician mara mma, jupụtara na ahịhịa ndụ, ị gaghị echefu ụzọ njem a. Ọ bụ ogologo ụzọ na Mpaghara Ribadumia, nke na-agwụ na Pazo de Armenteira na Meis. Ọ bụ ụzọ dị ogologo, ọ ga-ewe gị ogologo oge, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị kwụsị n’akụkụ niile mara mma o nwere. Nwere ike ịhụ obere mmiri mmiri, ụlọ okwute na ọkachasị ụlọ igwe ochie eweghachiri eweghachi, nke taa na-arụ ọrụ ndị njem.
Obodo ochie Pontevedra
Pontevedra bụ obere obodo mara mma, nke anyị ga-ahụ obodo ochie ya n'anya. O nwere mpaghara ochie ebe enwere ọtụtụ ụlọ mmanya iji nwee ụdị tapas, dị ka ndị dị na Ogige Leña, na ọtụtụ n'okporo ámá na-eje ije na-enwe na-achọta iberibe nkume obe. I nwekwara ike ịga leta Plaza de la Peregrina mara mma, ebe ụlọ ụka na-enye aha ya dị, nwere akụkụ pụrụ iche. O doro anya na ọ bụ otu n'ime akara nke Pontevedra.
Combarro obodo azu
Smallmụ obere obodo ndị a anaghị anọkarị ebe ndị njem na-agakarị, mana nke bụ eziokwu bụ na obodo Combarro na-agakarị eleta. Ma nke a bụ n'ihi na ọ bụ obodo nta azu nke jigidere amara ya nile mgbe ọtụtụ narị afọ gasịrị. Anyị ka nwere ike ịhụ ụgbọ mmiri ndị na-akụ azụ̀ ndị mara mma na ndị tụrụ àgwà, na ebe a na-akwakọba ihe ndị dị n’akụkụ oké osimiri. O nwekwara obere n'okporo ámá ndị dị warara na warara na ụfọdụ ụlọ nri ebe ị nwere ike ịnwale ụdị nri ndị Galician kachasị mma.
Cambados na albariño
Na Rías Baixas ị ga-akwụsị na mpaghara Cambados. Ọ dị mfe n'ihi na ọ dị nso na Ruta da Pedra e da Auga. Obodo a nwere obodo ochie, nke mara mma ma na-akpachara anya Pazo de Fefinans ọ bụkwa ebe a na-eme ememme Albariño a ma ama n’izu mbụ nke Ọgọstụ. O nwere ọtụtụ nkuku ị ga-ahụ, na ịgagharị n'okporo ámá ochie ya ma ọ bụ site n'ọdụ ụgbọ mmiri ga-enye anyị echiche nke ihe obere obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri Pontevedra dị. Ọ bụrụ na anyị nwere ohere, anyị agaghị echefu ịga na ebe winari Albariño. Na Cambados, anyị nwekwara ike ịhụ mkpọmkpọ ebe mara mma nke Santa Mariña de Dozo, ebe jupụtara na ịhụnanya, yana mkpọmkpọ ebe nke ụka Gothic nke narị afọ XNUMX, nke a na-echekwa arches mara mma. Ọ ghọọla akara ngosi ọzọ nke obodo Cambados, ọ bụ ezie na ọ naghị adị n'etiti.
Osimiri nke Rías Baixas
Ọ bụrụ na anyị erute n’oge ọkọchị, anyị agaghị agbaghara ọtụtụ osimiri ndị sitere n’okwute Rías Baixas. Site na La Lanzada na O Grove, na obere osimiri nke Island nke Arousa ma ọ bụ ndị nọ na mpaghara Cangas. A ga - enwe ọtụtụ mpaghara aja ebe ị ga - enwe ihu igwe dị mma, mana ee, anyị ga - eme ka ọnọdụ mmiri nke Galicia mara. Ihe dị mma gbasara mpaghara a bụ na enwere ọtụtụ aja aja nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ na-ekwo ekwo, yana ụdị ọrụ niile, nke na-amachaghị, ịnọ naanị ya ma dịkwa jụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga - ahụ na mpaghara Pontevedra (I)
Ihe ị ga-ahụ na Hanoi, isi obodo Vietnam